City of Vantaa - 20210803_syyslukukausi_alkaa_lahiopetuksessa_somali
Waxbarashada aasaasiga ah, dugsiyada sare iyo Varia, waxaa ay bilaabayaan waxbarashada lagu qaato goobta waxbarashada ee xilli-dugsiyeedka dayrta
Barbaarinta hore ama xannaanada carruurta waxaa ay hawlahooddii u sii socon doonaan sidii caadiga ahayd. Kooxda iskudduwidda arrimaha korona ee caasimadda iyo hareeraheeda waxaa ay shir isugu yimaadeen talaada 3.8.2021. Shirkaas waxaa lagu go’aamiyay, in waxbarashada xilli-dugsiyeedka dayrta ee heerka labaad ee caasimadda iyo hareeraheeda lagu bilaabo qaabka ah waxbaridda ay ardaydu ku qaataan goobta waxbarashada. Go’aankaas wuxuu khuseeyaa waxbarashada aasaasiga ah, macahadka xirfadaha ee Varia iyo dugsiyada sare ee Vantaa
Barbaarinta hore ama xannaanada carruurta waxaa ay hawlahooddii u sii socon doonaan sidii caadiga ahayd. Waxbarashada aasaasiga ah iyo waxbrashada dugsiga sare waxaa ay bilaaban doonaan toddobaadka soo socda maalinka Arbaco 11.8.2021.
Ardayda cusub ee machadka Varia waxaa ay waxbarashada bilaabayaan Arbaco 4.8. Ardayda machadka Varia ee sannadka 2-aad iyo 3-aad, waxaa ay bilaabayaan waxbarashada xilli-dugsiyeedka deyrta Arbaco 11.8.
Xannaanooyinka, macaahidda iyo iskuullada waxbarashada ee degmada Vantaa waxaa loo hoggaansamayaa tilmaanbixinta dhanka ammaanka korona ee xilligaan shaqaynaaya (waxaa ka mid ah. afshareerka iyo qalabka kale ee cudurka la isaga ilaalinaayo, gacmo dhiqista, kala fogaanshaha).